दिनमा कतिपटक खानु ठिक ? – तहल्काखबर
दिनमा कतिपटक खानु ठिक ?
२०७४ माघ ७ January 21, 2018 गोपिन पोखरेल
कसरी खाने, कति खाने ? यसबारे हामी अभ्यस्त हुँदैछौ । भनिन्छ, हामीलाई खानपानबारे उत्ति ज्ञान छैन ।
जबकी प्राण धान्नका लागि खाना आवश्यक हुन्छ । खाना ति सबै स्रोत हुन्, जसले शरीरलाई आवश्यक पोषण तत्व प्राप्त गरिन्छ । तर, खानपानबारे हामी उस्तो जानकारी लिने गर्दैनौं ।
खानपान सम्बन्धी राम्रो ज्ञान भएमा मात्र हामीले त्यसको सही सदुपयोग गर्न सक्छौं । किनभने एउटै खानामा सबै किसिमको पोषक तत्व पाइदैन ।
एउटा खानेकुरामा जुन पोषक तत्व पाइन्छ, अर्कोमा त्यो नपाइन सक्छ । त्यसैले सबै किसिमको पोषक तत्व ग्रहण गर्नका लागि थरीथरीको खानेकुरा खानुपर्छ ।
कुनैपनि पोषक तत्व आवश्यक भन्दा बढी वा कम भएको राम्रो मानिदैन । यो सन्तुलित हुनुपर्छ । त्यसैले कुन खानेकुरामा के पाइन्छ, त्यो कति खाने भन्ने कुरा जान्नुपर्छ ।
कुन खानेकुरा कति खाने भन्नेले मात्र पनि पुग्दैन । त्यो कति बेला खाने भन्ने पनि जान्नुपर्छ । दिनमा कति पटक खानेकुरा खाने भन्ने तालिकाले हाम्रो स्वास्थ्यलाई सही ढंगले पोषण आपूर्तिमा सघाउ पुर्‍याउँछ । यो भनेको भोजन व्यवस्थापन पनि हो । किनभने एकै पटक धेरै खानेकुरा सेवन गर्दा पाचन पक्रियालाई असर गर्छ । त्यसैले समय तालिका अनुसार खानेकुरा खानु राम्रो हो ।
कति पटक खानु राम्रो
सामान्यतया हामी दिनमा तीन पटक खाने गर्छौ, बिहान, दिउसो र बेलुकी । बिहान र बेलुकी खाना खाइन्छ भने दिउँसो खाजा ।
तर डाइटिङको चक्करमा केही व्यक्तिहरु बेलुका खाना खाँदैनन् । यसबाट उनीहरु वजन कम गर्न त सफल हुन्छन्, तर यसले दिर्घकालमा स्वास्थ्यलाई हानी पुर्‍याउन सक्ने विज्ञहरुको कथन छ । केही विज्ञहरुको मान्यता छ कि दिनमा तीनपटक खाने गर्दा स्वास्थ्य राम्रो रहन्छ । यो भन्दा बढी खाँदा पेटले पचाउन नसक्ने र स्वास्थ्य बिगि्रने गर्छ ।
डाइबिटिजमा रोगीहरुले दिनमा ३ पटक मात्र नभएर ५-६ पटक थोरै थोरै खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ । यसबाट शरीरको क्यालोरी बर्न हुन्छ र रगतमा सुगरको मात्रा पनि नियन्त्रणमा रहन्छ ।
यदि तपाईं आफ्नो वजन क मगर्न चाहनुहुन्छ भने पनि दैनिक पटक-पटक खानेकुरा खानु आवश्यक छ ताकि तपाईंको मेटाबोलिज्म स्थिर रहोस र क्यालोरी बर्न भइरहोस ।
यदि क्यालोरी एब्जर्व हुनुका साथसाथै बर्न पनि भइरह्यो भने यो जम्न पाउँदैन र तौल नियन्त्रणमा रहन्छ । अनलाइनखबर
डाइटिङ नगरी तौल नियन्त्रण गर्ने १० काइदा
कन्काई नगरपालिकाको उदाहरणीय कार्य : बृद्धबृद्धाको हुने भो निशुल्क जीवन विमा
२०७४ चैत्र १५ March 29, 2018 गोपिन पोखरेल
हर्मोनलाई यौनमा स्खलित गर्ने कि कलामा ? डा. योगी विकासानन्द
२०७४ पुष १२ गोपिन पोखरेल
किन फुल्छ कम उमेरमै कपाल ?
२०७४ माघ १३ January 27, 2018 गोपिन पोखरेल